မာန် Flash Song မြို့ တော်မှကြိုဆိုပါ၏ . . . - နည်းပညာများ
မာန် Flash Song မြို့ တော်မှကြိုဆိုပါ၏ . . .
Flash Song များ
FlasH SonG 1
FlasH SonG 2>
Flash SonG 3>
Flash Song 4>
Flash Song 5
Chat ခန်းသို့ 
Driver Partition ကို Comm သုံးဖျောက်နည်း
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ . . . အခုကျွန်တော်တင်ပြမဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Driver Partition တွေကို comm သုံးဖျောက်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လုပ်နည်းတွေကိုတဆင့်ချင်စီပြောပြပါ့မယ်။ပထမဦးဆုံး (1) Go to Start > Run > "diskpart" ဆိုပြီး ရိုက်ပေးပါ
DISKPART> ဆိုပြီး command prompt နဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.....
2) ပြီးရင် "list volume" ဆိုပြီးရိုက်ပေးပါ။ Driver Partition တွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ....
3) အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ ဖျောက်ချင်တဲ့ Driver Partition ကိုရွေးပေးပါ ...
ကျွန်တော် က Drive D ကိုဖြောက်ချင်တာမလို့
"select volume 1" ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ... (1 နေရာမှာ 0လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်, 1 လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...)
(C),(D),(E), ရှိတဲ့စက်ကတော့ 1ပေါ့ ။(C),(D), ရှိတဲ့ စက်မျိုးကျတော့0ပေါ့ ။
4) volume ကိုရွေးပြီးသွားရင်
"remove letter D" ဆိုပြီးထပ်ရိုက်လိုက်ပါ...
Drive (D) ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ.... ပျောက်သွားပါပြီ ..
အဲဒီ Drive (D) ကိုပြန်ဖေါ်ချင်ရင်တော့ အဆင့် (1) ကနေ (3) ပြန်လုပ်ပါ (cmd ) ကိုပိတ်လိုက်ရင်ပေါ့
မပိတ်၇သေးရင်တော့ အဆင့် (2) ကနေ (3) အထိပြန်လုပ်ပြီး ...
အဆင့် (4) "remove letter D" ဆိုတဲ့နေရာမှာ "assign letter (D)" ဆိုပြီးပြောင်းရိုက်လိုက်ရင်ရပါပြီ
Drive (D) ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . .
~~ မာန် ~~
Windows7Activate
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ . . .
ကျွန်တော် post တွေမရေးဖြစ်တာတော်တော်ကြာပါပြီး။ကျွန်တော်စာဖတ်တာများပြီးမျက်စိနည်းနည်းထိသွားတယ်။ဆရာဝန်ကကွန်ပျူတာကိုလုံဝမကြည့်ပဲမျက်လုံးကိုအနာပေးပါဆိုလို့ ကွန်ပျူတာမသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒီနေ့ တော့ပျင်းလဲပျင်းတာနဲ့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ကြည့်တာပြဿနာကအဲဒီကစတာပဲ ၀င်ဒိုးကအသစ်တင်ထားတာအခု Activate မဖြစ်ဘူးထလုပ်နေတယ်။ဒါနဲ့ ရှိတဲ့ Loader သွင်းကြည့်လိုက်တယ်။အဆင်မပြေဘူး ခေါင်းကစားပြီး နောက်တနည်းလုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။Activate တောင်းတဲ့ကောင်တက်ကိုမလာတော့ဘူး။Computer က Restar တောင်းတော့ပေးလိုက်တယ်။ပြန်တက်လာတော့ကျေးဇူးရှင်ကအကောင်ဗျာ. . .
ဘယ်လိုလုပ်လိုက်သလဲဆက်ရှင်းပြမယ်ဗျာ . . .Windows7တွေ Activate ပျက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Activate မဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုပ်နည်းလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။Windows7ultimate,Windows7Starter,Windows7Professional,Windows7Premium,Windows7Home Premium တွေရဲ့ Operating System ဖြစ်တဲ့ 32bit(x86) နဲ့ 64bit(x64) တွေအားလုံးကို Activate ဖြစ်စေပါတယ်။အရေးကြီးတာတချက်ကတော့Activate မလုပ်ခင် Internet အရင်ပိတ်ပါ.. ပြီးတော့ Automatic Windows Update ကိုပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ပိတ်နည်းကိုပြောပြပါမယ်..
1. Start > Control Panel> System and Security ကိုနှိပ်ပါ.
2. ဘောက်ထဲက ညာဘက်မှာ Windows Update ကိုတွေရပါမယ်.. အဲဒီနဲ့ကပ်လျက်အောက်က Turn Automatic Updating On or Off ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
3. ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲက Inportant Update ခေါင်းစဉ်မှာ ဒိုင်းပုံစံလေးဘေးက ဘောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး ကျလာတဲ့ List ထဲက Never Check for Update ကိုရွေးလိုက်ပါ..
4. ပြီးရင် အဲဒီဘောက်ထဲမှာပဲ. Give Me Recommand Update နဲ့ Allow All users to install update update နှစ်ခုရဲ့ဘေးက အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ခဲ့ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ..
1. Run Box (ctrl+R)ထဲမှာ msconfig လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
2. ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲက အပေါ်မှာ General , Boot, Services စတဲ့ Tab တွေရှိတယ်.. အဲဒီထဲက Services ဆိုတဲ့ Tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အကွက်ထဲက စာတန်းတွေရဲ့ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်တွေနဲ့မြင်ရမှာပါ.. အဲဒီစာတန်းတွေထဲက Windows Update ရဲ့ ဘေးက အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ခဲ့ပြီး Apply.. OK ကိုနှိပ်ပါ။
နှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။
Windows Activation ဆုံးရှုံးချင်းမှကင်းဝေးကြပါစေဗျာ . . .
ကွန်ပျုတာ Speed မြန်အောင်လုပ်နည်း
Start >> Run (or) win + R ကိုကလစ်ပါ..
run box တွင် prefetch ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကို delete ပေးလိုက်ပါ...
run box တွင် regedit ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ Registry Editor box အောက်က
HKEY_CURRENT_USER >> Control Panel >> Desktop ထိအစဉ်လိုက်သွားလိုက်ပါ..
Desktop ရောက်ရင် double click ပေးလိုက်ရင်ဘေးက box က MenuShowDelay ကို
right click >> modify>> Value data ကို 400 ကနေ0ထိလျှော့ချပေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
run box တွင် msconfig ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ box မှာ Startup Tab ကိုသွားပါ..
အဲဒီက မလိုအပ်ဖူးထင်တဲ့ software တွေက အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ.
ပြီးရင် Apply ok ပေးလိုက်ပါ restart တောင်းပါလိမ့်မယ် Exit Without Restart ကိုပဲကလစ်လိုက်ပါ.
တကယ်ဆိုရင် restart ပေးရမှာပါ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က နည်းလမ်းငါးမျိုးလုံးလုပ်မှာဖြစ်လို့ မပေးပါနဲ့
အားလုံးပြီးမှ restart ပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်.
Start >> Control Panel >> System ထိရောက်အောင်သွားပြီး double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ.
(mycomputer >> right click >> Properties ဆိုရင်လည်း တူတူပါပဲ)
System Properties Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Advanced Tab >> Performance Settings ကိုကလစ်လိုက်ပါ.
Adjust for best performance ကိုရွေးပြီး Apply ok ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ..
PC ကတော့ ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် effect တွေမပါတော့တဲ့အတွက် သိသိသာသာ ပေါ့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်..
run box တွင် system.ini ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ..
ပေါ်လာတဲ့ Notepad ထဲမှာ အောက်က code လေးကို copy ကူးပြီး အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ..
page buffer=100000kbps load=100000kbps Download=100000kbps save=100000kbps back=100000kb
ပြီးရင် file >> save ပေးပြီး close လိုက်ပါ ..အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် ကွန်ပျုတာကို restart ချလိုက်ပါ..
ဒီလောက်ဆိုသင့်ကွန်ပျူတာဟာအရင်ကထက်သွတ်လက်နေပါပြီး . . . .
System Maintenance ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလည်းဆိုတော့ ကျတော်တို့ Windows တွေကို အသစ်တင်လိုက်အခါ စစချင်းတင်ခါစ မှတော့ စက်က သုံးရတာ မတရားမြန်ပါတယ် နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း ကြာလာတဲ့ အခါ စက် ရဲ့ Perfromance ဟာကျလာပါတယ် အဲ့ဒီ့ ပြသနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် System Maintenance ကို အသုံးပြုပေးရမှာပါ
System Maintenance ကို အကြမ်းအားဖြင့် ၄ မျိုးခွဲထားပါတယ်
1. check disk
3. disk defragmenter
4. delete temp file တို့ဖြစ်တယ်
1. Check disk ဆိုတာကတော့ computer ရဲ့ speed ကို မြှင့်တင်ပေးတာမဟုက်ဘဲ hard disk ရဲ့ performance ကိုမြှင့်တင်ပေးတာပါ hard disk ကို physically အားဖြင့် သက်တမ်းရှည် အောင် ပြုလုပ်ပေးတာ ဖြစ်တယ်
check disk ကို run ချင်ရင်တော့ my computer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ စစ်ချင်တဲ့ drive တစ်ခုခုကို R-click နှိပ်ပါ
properties >tool tab > error checking မှာ check ကိုနှိပ်ပါ
2. Disk cleanup ကို ရှင်းခြင်းအားဖြင့် computer ရဲ့ performance ကိုမြှင့် တင်ပေးတာပါ computer မှာ မလို အပ်တဲ့ file အကြွင်းအကျန်တွေကို ဖျက်ပေးပါတယ်
disk cleanup ကို run ချင်ရင်တော့ My computer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် HD drive တစ်ခုခုပေါ်မှာ R-click> properties>generatl tab ထဲက disk cleanup ကိုနှိပ်ပါ ကျလာတဲ့ box မှာ အကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီး cleanup system file ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ok ပြီးတော့ delete file ဆိုရင်ပြီးပါပြီ
3. Disk defragmenter ဆိုတာက တော့ HD ပေါ်မှာ အစီစဉ်မကျဘဲ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ data တွေကို အစီစဉ်တကျဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်
disk defragmenter ကို run ချင်ရင်တော့ ချင်ရင်တော့ my computer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ စစ်ချင်တဲ့ drive တစ်ခုခုကို R-click နှိပ်ပါ
properties >tool tab > opitimize ကိုနှိပ်ပါ box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့် မယ် အဲ့ဒီ့ မှာ opitimize ကို မလုပ်ခင် analyze ကိုနှိပ်ပါ သဘောက တော့ analyze ဆို disk တွေကို opitimize လုပ်ဖို့မလို စစ်ပေးတာပါ
ဒါဆို analyze ကိုနှိပ်လိုက်ပါ select မှတ်ထားတဲ့ drive ရဲ့ ဘေးကို ကြည့်လိုက် ပါ ၁၆% defragmented ဆိုရင်တော့ optimize လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့် မယ် 15% အောက်ဆိုရင်တော့ optimize လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး
4. Delete temp file ဆိုတာကတော့ CPU က processing လုပ်ရာတွင် ပိုမိုလျှင်မြန်အောင်လို temporary file တွေကို HD မှာ သိမ်းထားတာပါ ကြာလာတော့ temp file တွေများလာပြီး မိမိစက်ရဲ့ performance ကိုကျလာစေပါတယ် delete temp file ကို ပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ Run box ထဲမှာ
1. recent 2. Temp 3.%temp% 4. Prefetch အဲ့ဒီ့ ၄ကို တစ်ခုချင် Run box ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး shift delete နဲ့ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သင့် ကွန်ပျူတာကို အတော်အတန်သင့် လျှင်မြန်စေမှာဖြစ်ပါတယ် —–
*** ကျတော်ပြောခဲ့တဲ့ အချက် ၄ ချက်ကို ၂ ပတ် ၁ခါ သိုမဟုက် ၁လ တစ်ခါလောက်ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်
တကယ်လို drive အားလုံးကို မရှင်းပေးနိုင်ရင်တောင် မှ windows တက်တဲ့ အပိုင်းကို တော့ ပြုလုပ်ပေးချင်ပါတယ် windows တင်တဲ့ အပိုင်းကို သိချင်ရင်တော့ Run box ထဲမှာ \_ (back select) ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ကျလာတဲ့ အပိုင်းဟာ windows တက်တဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် windows တင်တဲ့ အပိုင်းကို c: မှာသာတင်လေ့ရှိပါတယ်။
Android ဖုန်းကနေ PC ကိုထိန်းချူပ်မယ်
ကျွန်တော်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ ဆော့စ်ဝဲလေးကတော့တော်တော်ကိုမိုက်တယ်။ကျွန်တော်က Ipad နဲ့ ကွန်ပျူတာကိုထိန်းလိုရတဲ့ဆော့စ်ဝဲကိုအရင်တွေ့ လိုကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်တာတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဗျာ။အဲဒါနဲ Android ဖုန်းတွေတွက်ကောရှိမလားဆိုပြီးမွှေနောက်ကြည့်တယ်။တွေ့ လိုက်ရတဲ့ဆော့စ်ဝဲလေးကတော့ remotepcserver ဆိုတာတွေ့ လိုက်တယ်။ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်လိုအပ်တာကတော့သင့်ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်တာ Java ပဲ။သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Java မရှိရင်တော့ Google နေ့Java လိုရိုက်ပြီးသင့်စက်နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ Java ကိုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်(ဥပမာ-သင့်စက်က 32bit လား 64 bit လားပေါ့)။ဘာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်သလဲဆိုတော့ Mouse ,Multimedia , Presentation and Power စတာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးတော့Mouse and Keyboard အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင်။ ကွန်ပျူတာကWindow Media Player စတာတွေကိုလဲRemote လုပ်လိုရပါသေးတယ်။အသံတိုးမယ်အသံ ချဲ့ခြင်တယ်ရပ်ထားလိုရတယ်။ဒါ့အပြင်Presentationဆိုတဲ့ Systemလေးကလည်းမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာDoc တွေဖတ်တဲ့အခါအရမ်းအသုံးဝင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဥပမာ Internet Journal ဖတ်ဖိုရ်Adobe reader နဲ့ဖွင့်ပြီးဖတ်တဲ့အခါ ကွန်ပျူမှF5 ကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့စာမျက်နှာတွေကိုတရွက်ခြင်းဆီကိုလှန်ပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးတခုဖြစ်တဲ့Power systemကတော့ မိမိရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုအလွယ်တကူ Stand by ,Turn off, Restart , Switch user and Lock စတာတွေကိုစေခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Bluetooth အသုံးပြုလိုရတဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာအသုံးပြုလိုရပါတယ်။Iphone,Ipad တွေမှာကျတော့ဆော့စ်ဝဲမှာ Ip ပါပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာထည့်ထားတဲ့ဆော့စ်ဝဲက Ip ကို Iphone,Ipad မှာထည့်ထားတဲ့ဆော့စ်ဝဲထဲကို IP ထည့်ပြီးတာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တူညီတဲ့ WiFi ရှိမှအသုံးပြုနိုင်တာ။ Android မှာတော့ Bluetooth နဲ့ အသုံးပြုနိုင်တယ်အဲဒါလေးတွေကွာသွားပါတယ်။လိုချင်တဲ့သူများရှိရင်တော့ကျွန်တော်လင့်နှစ်ခုပေးပါမယ်တခုကဖုန်းတွက် APK ဖိုင်နောက်တခုက PC တွက်Zip ဖိုင်လေးပါ။ Pc တွက် =>http://www.mediafire.com/?9smvl777pgijzw2 / ဖုန်းတွက်=>http://www.mediafire.com/?u2b0sem0ta9ax74အဆင်မပြေရင်တော့ပြောပါဗျာ။
1. Download the server to your computer
2. Turn on Bluetooth on the PC
3. Extract downloaded file and launch Remote PC Server.jar
4. Run the application in your mobile. Choose Bluetooth connection −> select the computer from Paired Devices −> wait for connection
• Multimedia control (iTunes, KMPlayer, PowerDVD 11, QuickTime Player, RealPlayer, Rhythmbox, VLC Media Player, Winamp, Windows Media Player)
• Presentation control (MS PowerPoint, OO Impress, Adobe Reader) with stopwatch
• System power control
Support the following operating systems:
• Windows7(x86, x64)
• Windows Vista (x86, x64)
Super Sunday မှာပျင်းတာနဲ့ တနေ့ လုံး Movie ကြည့်နေရတာပျင်းလာတာနဲ့Virus အသေးစားလေရေးကြည့်လိုက်တယ်။မိုက်တာလိုမပြောနဲ့ ထိန်းလိုကိုမနိုင်ဘူး ဟီး။ဒီ virusကအပျော်သဘောနဲရေးတာနော်။မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှထိခိုက်ပါစေဆိုပြီးမရည်ရွယ်ဘူး။Computer System ပိုင်းကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ရေးပုံရေးနည်းလေးကတော့သင့် Computer ရဲ့ လွတ်တဲ့နေရာမှာ မောက်ထောက်ပြီးRight clickနှိပ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့ Box ထဲက New>>shortcutကိုရွေးလိုက်ပါ။type the location of item ဆိုတဲ့ အကွက်ထဲမှာ shutdown -s လိုရေးပြီး Next နှိပ်ပါ။ typeaname for shorcut ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ Virus မှန်မသိအောင်လို Game ဒါမှမဟုတ် Photo ပေါ့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုပေးလိုက်။ပြီးရင်တော့ finish ပေါ့။ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Shortcut လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Icon ချိန်လိုက်ကိုယ်ပေးထားတဲ့Name နဲ့ လိုက်ဖတ်မဲ့ Icon ပေါ့(Icon ချိန်းတာတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်မရေးပြတော့ဘူးနော်)။ပြီးပြီးဆိုရင်တော့Desktopမှာရှိတဲ့ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Shortcut လေးကိုနှိပ်ကြည်လိုက် ဟ ဟ ဖြစ်သွားမယ်။Computer က Shutdown ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ Run>>cmd>>shutdown -a ဆိုပြီးအမြန်တာရိုက်လိုက်ပါပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။တခုသတိပေးလိုက်မယ်နော်Time before shutdown မှာ စက္ကန့်တွေ 00 မဖြစ်သွားခင် အမြန်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ငှဲ ငှဲ . . . လက်သွတ်မှရမှာနော် . . . အပျင်းပြေပေါ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်တော့ ကျွန်တော် မာန် တာဝန်မယူပါ ဟီးးးးး။
ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စာကို Batch ဖိုင်နဲ့ အသံထွက်ပြောခိုင်မယ်
@echo Dim speaks, speech>>speak.vbs
@echo Set speech=CreateObject("sapi.spvoice")>>speak.vbs
@echo speech.Speak speaks>>speak.vbs
ဒီ Code ကိုယူပြီး Notepad မှာထည့် .bat နဲ့Save လိုက်ပါ။Save ထားတဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာကိုအသံထွက်ပြောလိုက်မယ်။Code ထဲ Hello ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ပြောစေချင်တာကိုပြောင်းပေးလိုက်။
Matrix Code တခုရေးမယ်
Martrix code ဆိုတာကတော့ ဟက်ကင်းပိုင်း လေ့လာနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေမျက်စိကျနေတဲ့ CODE အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောမဲ့ Code ကတော့ Command Prompt ကိုသုံးပြီးတော့ Batch ဖိုင်နဲ့ ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။Notepad ကိုဖွင့်ပြီးတော့
title ~~ManG~~ Matrix Re-Reloaded
echo Man G6842397349753179 109
echo589236 87125365420 8 Man G
echo65 1660646 165 1 Man G
5 165 160 160434124 Man G
ဒီCode တွေ ကူးထည့်လိုက် Save ရင်.bat နဲ့Save ပြီး Run ကြည်လိုက် လဲ လဲ လဲ လဲ ဖြစ်သွားမယ်။
FaceBooK မှာကိုယ် Profile ကိုဘယ်သူဝင်ကြည့်လဲသိချင်သူများတွက်
ကြိုတော့ပြောထားမယ် ကျွန်တော် Hacker လဲမဟုတ်ဘူး Cracker လဲမဟုတ်ဘူး။အခုပြောမဲ့အကြောင်းရာက IP ကိုရှာပြီးကိုယ် Profile ထဲဘယ်သူဝင်သွားလဲကြည့်တာပဲ။ကျွန်တော်ကိုသူခိုးလမ်းပြလိုတော့မထင်နဲ့ နော်(သိတဲ့သူကတော့သူခိုးလမ်းပြလုပ်နေတယ်လိုပြောမှာသေချာတယ်ေိခိ)။သူတပါးအကျိုးယုတ်စေမဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်မိဖို့ ကြိုပြီးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။IP သိရင်ဘာလုပ်လိုရလဲဆိုတာတော့ ဆရာသမားတွေသိပါတယ်။ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ကိုယ် IP မသိစေချင်ရင်တော့ ပရုပ်ဆီလေးစောင့်ထားပေါ့ေိခိ။ပြောတာနဲနဲများသွားပြီးလိုရင်ပြောကြစို့ ဗျာ။အရင်ဆုံး ကိုယ်ရဲ့FaceBook Account ကို Log In ၀င်လိုက်ပါ။News Feed တွေရှိတဲ့နေရာမှာ Right Click နှိပ်လိုက် BOX ကျလာလိမ့်မယ် More ဆိုတာရှိတယ်နှိပ်လိုက် View Page Source ဆိုတာကိုထပ်ပြီး Click လိုက် Tag တခုပွင့်သွားပြီး Code တွေများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီ code တွေပေါ်မှာမောက်လေကိုတချက်ကလစ်လိုက်(ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)။Keyboard က Ctrl+F ဆိုပြီးတွဲနှိပ်လိုက်ပါ။Boxလေးတခုထွက်လာမယ်အဲဒီထဲကို ordered_list.top_friends ကိုCopy လုပ်ပြီး အဲဒီ Box ထဲကို Past လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ခဏက Code တွေထဲမှာ ordered_list.top_friends ဆိုပြီးလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့ ပေါ်လာလိမ့်မယ်။လိမ္မော်ရောင်နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ဘေးကနေScrollလုပ်ပြီး ဥပမာပေါ့ဗျာ "100005749-4" "1000246531-2" ဒီလိုမျိုး IP လေတွေရှိနေလိမ့်မယ်။သင့် Profile ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့။အဲဒီလို နံပါတ်တွေအများကြီးပေါ်နေရင်တော့သင့် Profile ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သင့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ IP တွေပါပဲ။ဆက်ပြီးတော့ဘယ်သူကိုယ် Profile ထဲဝင်လဲသိရအောင်လို ဥပမာ 100005749-4ဆိုပါတော့နောက်က4ကိုပယ်လိုက် 100005749 ဆိုတာကိုပဲယူလိုက်။Bower အသစ်တခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုလေး www.facebook.com/100005749 ဆိုပြီး Enter ခေါက်ကြည်လိုက်။အဲဒီမှာစတွေ့ တာကိုယ် Profile ထဲကိုဝင်ကြည်နဲ့ ငနဲဘယ်သူလဲဆိုတာစတွေ့ တော့တာပဲ။ကောင်းသောနေရာမှာသာအသုံးချကြပါမြန်မာလူမျိုးတို့ . . . .
Android ဖုန်းများတွက် Pattart Lock ဖြုတ်နည်း
Android Phone ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ သိထားသင့် ရှိထားသင့်တဲ့ PC Software လေးတစ်ခု မျှဝေပေးချင်
ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်သလည်းဆိုရင် မိမိရဲ့ Phone ကို အခြားသူများဝင်မကြည့်နိုင်စေရန်အ
တွက် Pattern Lock ထားကြပါတယ်။ အဲဒီ Pattern Lock ကို မေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းထဲကိုဝင်လို့မရတော့
ပါဘူး။ အဲဒီတော့ Pattern Lock မေ့တက်သူများအတွက် Pattern Lock ဖျက်တဲ့ Software လေကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ Personal Data တွေ တစ်ခုမှပျက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်USB Debugging On ထားခဲ့ဖို့တော့လိုပါတယ်။ On မထားခဲ့မိပြန်ရင်လည်း
Pattern Lock ကိုဖျက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တခုက Root လုပ်ထားတဲ့
ဖုန်းများမှသာ Pattern Lock ကိုဖျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Pattart Lock ဖြုတ်နည်းလေပြောပြပါ့မယ်။
အရင်ဆုံး Remove Pattern ကိုဒီလင့်http://www15.zippyshare.com/v/24786504/file.htmlကနေဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပြူတာကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့Remove Pattern ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲက Remove Pattern.bat File ကို Double Click နှိပ်
လိုက်ပါ။Press any key to continue ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးပေါ်လာရင်တော့ Enter ခေါက်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့Mission
ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Pattern Lock ကကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြန်ပြင်နိုင်ပါပြီ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
<div style="text-align: center;"><a target="_blank" title="Let's Go To My Site" href="http://mangflashsongmyotaw.weebly.com/"><img src="http://s17.postimg.org/8wvxddgqn/llll.jpg"" alt="Photobucket" border="0"></a></div>